thinzar's blog: Upin & Ipin
Last weekend, I gotacopy of an animation titled Upin & Ipin,astory abouta5 year-old twins telling about their first experience of fasting in the month of Ramdhan. It’saMalay-speaking animation with English sub-titles. I was so attached to it and I can’t stop watching it over and over again till I could memorize most of their conversations.
“Eh, tak baik.. nanti lu punya tuhan marah.”
“mana acik?” “acik dekat India la”
“puasa tak mati kan?”
After I read the news about the production company winning many awards, I mumble to myself, they deserve!! I can’t wait to see the animation film” GENG : THE ADVENTURE BEGINS” which is said to be released in this year.
Upin နဲ့ Ipin ဆိုတဲ့ အမြာွှလေးနှစ်ယောက် အကြောင်းနဲ့ မလေးရှား ရိုးရာကို ထင်ဟပ်ပြထားတဲ့ TV series လေးတစ်ခုပါ။ ၅နှစ် အရွယ် ကလေးလေး နှစ်ယောက်က ဥပုသ်လမှာ ဥပုသ်စောင့်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြောပြတဲ့ ပုံနဲ့ ရိုက်ထားတာ။ 3D ပိုင်းရော အရုပ် အသံပိုင်းရော အဘက်ဘက်က ကောင်းလွန်းတဲ့ made in Malaysia animation လေးကို အခေါက်ခေါက်ကြည့် ပြီး ချီးကျူး ပစ်လိုက်တယ်။ ကလေး သဘာဝ ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ထားပြီး နောက်ခံ စကားသံတွေလည်း ကာတွန်း ဇာတ်ကောင်နဲ့ လိုက်အောင်ကို ရွေးထားတယ်။ မလေးရှားရဲ့ တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ မလေးလူမျိုးတွေ စုံအောင် ထည့်ထားတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ ပြီးတာနဲ့ အဲဒီ animation ကုမ္ပဏီ ပိစိကလည်း တော်တော် နာမည်ကြီးသွားတယ်။
အပေါ်က အပိုင်း ၁
episode 2, episode 3, episode 4, episode5& 6
Les Copaque Production HomePage
ကာတွန်း ဇာတ်ကောင်လေးက တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်။ နာမည်ကြီးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လည်းကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲ။ အဲကလေးတွေအိပ်ရာထဖို့ နိုးရတာမြင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်မြင်လာတယ်။ ရမ်ဇာန်လမနက်ဖက် ဆိုလူကြီးတွေ တော်တော်နိုးရတာလေ။ :P ။ ဒီပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါနော်အစ်မ။
winkabar>> ဟုတ်တယ်။ အစ်မလည်း ကြိုက်လွန်းလို့။ ဒါ အပိုင်း ၁ ဘဲ ရှိသေးတယ်။ အပိုင်း ၂ ကနေ ၆ အထိ youtube မှာ ရှိတယ်။ အစ်နေ့ အထိပါတယ်။
21/2/08 12:51 PM
i have same fondness for cartoons.
I will watch it when i am free.
and hit u back with more comments naw :D
nice blog u have btw..
will drop by often..
ciao kaka :D
26/2/08 6:29 PM
dilobear>> thanks4ur comment.. :)
27/2/08 10:32 PM